गण्डकी प्रदेश साँसद थापालाई पदबाट निलम्बन गर्ने तयारीमा जनमोर्चा - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ १०, सोमबार ०८:११
राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट गण्डकी प्रदेशमा निर्वाचित साँसद कृष्ण थापाको साँसद पदसमेत जाने भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रिय समितिले थापालाई एक वर्षका लागि पार्टि सदस्यनै नरहने गरि कार्वाही गरेको बताएको छ ।
एक वर्षका लागि पार्टि सदस्यताबाट निस्कासन गर्नु भएको साँसद थापालाई सँसदबाट समेत पद्च्यूत गर्ने तयारी हो । जनमोर्चाका एक केन्द्रिय सदस्यले भने, पार्टि सदस्यताबाट निस्कासन गरिएको छ, अब उहाँलाई साँसद पदबाट समेच च्यूत गर्ने पाटिको अन्तरिक तयारी अघि बढ्नछ ।’
पार्टिले गरेको निर्णय र निर्देशन विपरित गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई मुख्यमन्त्री टिकाई राख्न थापाले गरेको गतिविधि पार्टि निती विपरित रहेको भन्दै थापा यस्तो कार्वाहीमा पर्नुभएको हो ।
साँसद थापा माथि जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय, थापाकै अध्यक्षतामा वैशाखमा बसेको संसदीय दलको बैठक निर्णय र पार्टि ह्विप समेते उल्लङ्घन गरेको आरोप छ । थापालाई लगाइको आरोप मात्र होइन यो सत्य भएको पार्टिका केन्द्रिय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई छ ।
‘पार्टि जीस्वनमा यस्ता घटना नहुनुपर्दथ्यो, थापा जीले पार्टको अनुसासनमा रहन सक्नुभएन, निर्णय र निर्दैशन विपरितको काम गरे त कार्वाही हुन्छ नै । ’ अध्यक्ष केसीले यस्तो बताउनुभयो ।
पार्टिको साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन भएपछि त्यस्तो पार्टिको जनप्रतिनिधि पद राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार खारेज हुने व्यवस्था छ । तर केही कानूनी प्रक्रियाहरु भने पूरा गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले पार्टी सदस्यबाट समेत निष्काशन भएको व्यक्ती स्वतः संसद सदस्यबाट समेत निष्काशन हुने कुरा उल्लेख छ ।
सांसद थापालाई पार्टिले कारबाही गरेको निर्णय प्रदेश सभा सचिवालयमा प्राप्त हुँदा थापा संसदबाट समेत निष्काशन हुने गण्डकीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको भनाई छ । ‘जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको निर्णय भएको भन्ने छ, सचिवालयमा आधिकारीक जानाकारी भने नभएको बताउँदै अधिकारीले, संसद सचिवालयमा जानकारी आउनासाथ प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
यस अघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट गण्डकी प्रदेशमा संसदीय दलका नेता रहनुभएका थापालाई बैशाख २९ गते कारबाही गरी संसदीय दलका नेताबाट हटाएको थियो ।
उता थापाले भने, ‘पार्टिले जनताको कुरा सुनेन, स्थानीय स्तरमा अवस्था के छ, बुझेन, जवरजस्ती गर्दा ग्राउण्ड लेवलको अवस्था पिवरित हुने गरि काँग्रेसलाई भोट हाल्न सकिएन, यत्ति कारणले कार्वाहीमा परेवा साँसद पद गएपनि आफूलाई कुनै फरक नपर्ने बताउनुभएको छ । मेरो व्क्तिगत पद गएर के फरक पर्छ र ? थापाले भन्नुभयो, जनस्तरको कुरा के छ, अडान के छ, जनदवाव के छ, त्यो हेरेर राजननीति गर्ने हो, मैले पद हेरेर राजनीति गरिन यक्ति हो ।’ आफ्नो प्रतिक्रियामा थापाले स्पष्ट पाुर्नभयो ।
साँसद थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट बाम गठबन्धन सहित बागलुङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ प्रदेश (ख)बाट वजयी हुनुभएको थियो ।